iyo lg g3 pakupedzisira inowana yayo Android 6.0 marshmallow kugadzirisa pa & t (kugadzirisa: t-nhare, zvakare)
Kuru Nhau & Ongororo Iyo LG G3 pakupedzisira inowana yayo Android 6.0 Marshmallow kugadzirisa pane AT & T (UPDATE: T-Mobile, futi)
_ ZVIMWE:Zvinoenderana nemishumo, T-Mobile varidzi veiyo G3 vanogona kuwana Marshmallow kuburikidza neLG & apos; s PC Suite. Iyo yekumusoro-kwemhepo yekugadzirisa haufanire & apos; usave uri kure kure.
Iyo Android 6.0 Marshmallow inogadziridza akatanga kutanga kuoneka ye LG G3 pakupera kwegore. Nzira kumashure munaKukadzi, Verizon ipapo yakasunda yazvino kunaka yeGoogle & apos; s firmware kunze kune vatengi vayo vanozunungusa LG & apos; s makore maviri-ekuremekedza. Zvino, pakupedzisira, varidzi veAT & T vechigadzirwa vanogona kutora chikamu uye kukohwa iwo mabhenefiti mazhinji akasunganidzwa kuita nhamba yekuvaka MRA58K.
Kana iwe & apos; wanga uchitevera kufukidzwa kwedu kweMarshmallow & apos; s chikuru kuburitswa, iwe & apos; ungangove unoziva nezvakawanda zvemaficha. Mushure mekurodha pasi uye nekumisikidza iyo yekuvandudza, iwe unowana iyo Doze simba manejimendi chishandiso, Google Zvino paTap uye app mvumo, pamwe nekuwanda kwemamwe ma tweaks uye zvinowedzerwa. Kana iwe & apos; d senge yakawedzera kumhanya-pasi kweMarsmallow & apos; s maficha makuru, tarisa nekukurumidza pano . Zvakare, kumwe kwekunyanya kujeka kwekubika kwakabikwa muMarshmallow kwakavharwa mune ino chinyorwa .
Sezvakamboitika, iyo AT & T LG G3 yekuvandudza iri yakapetwa imwe, saka zvinogona kutora chinguva kusvika kune chako chishandiso. Chero zvazvingava, unogona kutora nzira yekuita basa nekupfura iyo Zvirongwa app, uchienda kuNezve Runhareuye kutarisa iyoSoftware Ruzivomenyu.
Tichifunga kuti iyo G3 yakatanga pa Android 4.4.2 KitKat, zvinofadza kuona kuti & # 39; apos; vachiri kuwana rumwe rudo. Zvizhinji zvemafoni efoni uye mapiritsi kubva panguva iyoyo akasiiwa kunze kuti akure senhau dzekare. Kunyangwe uchiwanzo kusekwa pamitengo yavo yakakwira, iwe unodaro, zvirinani, unowanzo tora zvishoma software mileage kunze kweanoshambadza mafoni seG3.
Iko yako AT & T LG G3 yawana pakeji yayo yekuchengetedza zvakadaro? Tiudze kuti iwe & apos; uri kuenderera sei nayo pazasi!
Throwback China: iyo LG G3 mumifananidzo
mabviro: Misoro ye Android , TMoNews
iphone 7 pamwe nenhandare yefoni
xfinity nhare vs & t
t nhare mbozha makumi maviri
Samsung & apos; s theme chitoro chinotyisa: 11 hombe, hombodo dzemahara dzeGPS S6 yako kana S6 kumucheto
Mashandisiro aungaita OK Google raira kubva kune chero skrini pane yako Android foni (kusanganisira iyo yekukiya skrini)
Imwe mutambo wepadhi yekutonga ivo vese: Android, Wii uye Wii U
Maitiro ekudzima otomatiki pane iPhone uye Android
Apple Watch Series 6: Stainless simbi vs aruminiyamu
Android 10 gadziriso inosiya mafoni ePixel akaomeswa nechando pachiratidziro chebhutsu kwemaawa
Apple & apos; s AirPods Pro yave kudhura pane panguva yeAmazon & apos; s Prime Day mhemberero (nyowani)
Samsung Galaxy Amp Prime 2 ndeyeCricket & apos; s itsva yakachipa Android Nougat foni
AT & T inosunga risingagumi dhata data uye DirecTV Iye zvino yakaderera kunge $ 70 pamwedzi
Sei mafoni emazuva ano akadhura?